I-Eumeralla Cottage - I-Airbnb
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Feb 28.
Ama-cottage amagugu (akhiwa ngo-1853) ahlinzeka ngokunambitheka komlando okuhlanganiswe nokunethezeka komlilo ovulekile kanye ne-spa enkulu ephindwe kabili.
Akhiwa ngo-1853, izindlu zethu eziyigugu ezisohlwini zazisebenza njengamakamelo amabhange, namahhovisi esifunda, futhi manje zinezindlu ezi-3 zezinkanyezi ezine. Ikotishi ngalinye linikezela ngesitayela somuntu ngamunye esinobuhle bezwe elidala nokunethezeka, elinendawo engadini ngaphandle nje komnyango wakho.
Ukupaka izimoto ezizimele ukuze kube lula kuwe.
I-Eumeralla isethwe ngamalahle amangalisayo, isiliva ne-aubergine tonings efaka isithombe sangemuva esihle se-Florence Broadhurst nefenisha ethambile. Ngomlilo ovulekile ozungezile, hlala emuva futhi ujabulele ingilazi ebomvu ku-cosiness yekotishi. I-King Bed kanye negumbi lokulala elihlukile elinemibhede emibili eyodwa, elilungele umndeni.
I-Port Fairy kanye nezindawo ezizungezile zinikeza okuningi ongakwenza ngenkathi uvakashela le ndawo.
Hamba eduze kwe-wharf okuwuhambo lwemizuzu nje ukusuka eSeacombe House.
Ngena kuMkhosi Wezinganekwane wasePort Fairy: owaziwa ngamaciko omculo asuke ekhona.
Funda ukuntweza kwelinye lamabhishi amaningi azungeze iPort Fairy.
Hamba ngezinyawo unqamule i-Tower Hill Game Reserve. Qaphela ama-kangaroo nama-emmu azulazula epaki.
Thenga uze uyofika ezitolo eziningi zezitolo ezigcwele elokishini. Imisebenzi yobuciko, izingubo zokugqoka, izicathulo nokunye okuningi kungatholakala.
Thatha ukushayela wehle ngo-Great Ocean Road futhi uvakashele abaPhostoli abayi-12 nezinye izici ezimangalisayo zasogwini.
Thatha ama-fish n chips, uhlale eduze kwamanzi futhi ujabulele umoya opholile we-Port Fairy.
Yidla ngaphakathi noma uphume kwezinye zezindawo zokudla ezidume kakhulu eSouth West. Noma ngabe i-pizza ekudleni okuhle, uqinisekile ukuthi uzojabula.
Emini ujabulele ikhofi nekhekhe futhi ubuke umhlaba uhamba ngokuhlala kwelinye lamakhefi amaningana.
Jabulela usuku ogwini lolwandle, ukuntweza umzimba, ukubhaka ilanga nokwakha inqaba yesihlabathi.
I have extensive experience in the accommodation and restaurant industry. A passion for people, food, wine & history. I am a lover of nature and Port Fairy is the perfect home…